အမှတ်မထင်ရိုက်ကူးမိတဲ့ ပရလောကသားများရဲ. ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေ | Buzzy
အမှတ်မထင်ရိုက်ကူးမိတဲ့ ပရလောကသားများရဲ. ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေ
1. Brown Lady
၁၉၃၆ခုနှစ်တုန်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Raynman ခန်းမမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပာာသာမန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါဓာတ်ပုံထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရိုက်ကူးရမိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပုံထဲကသရဲပာာ ယောကျာင်္းရဲ့ အနှိပ်စက်ခံရပြီး ထိုအိမ်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရတဲ့ Lady DorothyWalpole လို့ယူဆရပါတယ်။
2. The Fallen Solider
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တုန်းက စစ်သားတွေပုန်းခိုတဲ့ မြေအောက်ခန်းကဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ပုံမှာပေါ်တဲ့ ပုံရိပ်ပာာ သေသွားတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လို့ယူဆရပါတယ်။
3. The Graveyard Ghost
ဒီဓာတ်ပုံကတော့ အန်ဒရူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ပာာ သြစသြေလျ ကွင်းလန်းရှိသူရဲ့သမီးအုတ်ဂူမှာ ရိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံက ၁၉၄၀ခုနှစ်တုန်းကပုံပါ။
4. Worstead Church
ပီတာ ဘာတတ်လော့ပာာ Worstead ဘုရားကျောင်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်နေတုန်းသူမိန်းမဆုတောင်းနေတဲ့ပုံကိုအမှတ်မထင်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပုံထဲမှာ သူမိန်းမအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာအဖြူရောင်ပုံရိပ်ကိုတွေ့ လိုက်ရပါတယ်။
5. The Tulip Staircase
ကနေဒါနိုင်ငံသား အတွဲတစ်တတွဲပာာ ၁၉၉၆တုန်းက Queen အိမ်မှာရိုက်ယူရမိတဲ့ သရဲပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
6. Freddy Jackson
ဒီပုံတုန်းပာာ ၁၉၁၉ခုနှစ်တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ လေတပ်ကအဖွဲ့သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံထဲမှာဝိုင်းပြထားတဲ့သူကတော့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင် နှစ်ရက်အလိုမှာ သေသွားတဲ့စက်ပြင်ဆရာဖရက်ဒီ ဂျက်ဆင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
7. ဆေးရုံတစ်ခုကနတ်ဆိုးပုံ (The demon inahospital)
အမည်မသိဆေးရုံတစ်ခုက သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ဓာတ်ပုံရိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပုံထဲမှာ လူနာပေါ်ကို နတ်ဆိုးလို့ယူဆရတဲ့အရာကတတ်နေပြီး သိပ်မကြာခင်အတွင်း လူနာသေဆုံးသွားပါတယ်။
8. မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုက သရဲ (Ghost at the Wedding)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဟက်ဖော့ဒေသခြံတစ်ခုမှာ ဓာတ်ပုံစရာက ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်းအဆိုပါဖြူဖြူအရိပ်ကိုတွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခြံရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ အဆိုပါထဲကပုံသေသွားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံဖြစ်ကြောင်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
9. The old lady and her bulldog
ချီကာကိုအိမ်တစ်ခုမှာ ယောကျာင်္းဖြစ်သူအလုပ်သွားနေတုန်း သားအမိနှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံမှာပေါ်လာတာကတော့၎င်းတို့နောက်ခံမှာ အဖွားအိုပုံစံနဲ့ ခွေးတစ်ကောင်တို့ရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
10. Waverly hill sanitarium
အသုံးမပြုတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ စိတ္တဇဆေးရုံတစ်ခုကို သွားရောက်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်သေသွားတဲ့သူနာပြု မေရီ လီရဲ့ပုံကိုအမှတ်မထင်ရိုက်မိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆင်တဲ့ ကြောင်လေး (၁၀) ကောင်
Glaxy Star ပြိုင်ပွဲမှာ key နဲ့ Nay Min Eain ဘယ်သူ World Star ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ?